इजरायलले आउँदो महिनादेखि नेपालबाट ‘केयर गिभर’ लैजाने ! « Bagmati Online
इजरायलले आउँदो महिनादेखि नेपालबाट ‘केयर गिभर’ लैजाने !
काठमाडौं । इजरायलले आउँदो महिनादेखि नेपालबाट केयर गिभर (हेरचाह कामदार) लैजाने प्रक्रिया शुरु गर्ने भएको छ । नेपालका लागि इजरायली राजदूत हनान गोडरले आगामी महिनादेखि केयर गिभरका लागि कामदार लैजाने प्रक्रिया शुरु गर्ने जानकारी दिएका हुन् । नेपालबाट इजरायलको नर्सिङ क्षेत्र, अस्पताल, नर्सिङ होम, दिवा सेवा केन्द्र लागयतमा नेपाली केयर गिभर लैजाने सम्बन्धमा गत असोजमा सम्झौता भइसकेको छ ।
सम्झौतापत्रमा असोज १४ गते इजरायलका लागि नेपालकी राजदूत अञ्जान शाक्य र इजरायली परराष्ट्रमन्त्री गावी अस्केनाजीबीच श्रम सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्दै आगामी महिना देखि कामदार छनौटको प्रक्रिया शुरु गरिने राजदूत गोडरले बताए ।
सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालबाट धेरै संख्यामा कामदारहरु जान सक्ने पनि राजदूत गोडरले जानकारी गराएका छन् । सम्झौता अनुसार सरकारी तवरबाट नेपाली श्रमिक कामका लागि इजरायल जाने छन् । यस्तै नेपली श्रमिकले इजरायली नागरिक सरहको सेवा सुविधा र संरक्षण समेत पाउने छन् ।
कात्तिक १५ देखि दक्षिण कोरियाको रोजगारीमा जान पाइने !
तीन वर्षपछि खुल्यो मलेसियाको रोजगारी, कामदार जाने प्रक्रिया पुरानै
नेपालीहरु अब मलेसिया जान पाउने !